Amazon Turkey Integration - Propars E-export miaraka amin'i Amazon, Ebay, Allegro ary Etsy
Ny fitantanana ny filaminana sy ny fiverenana
ERP / fampidirana kaonty
miditra Manomboha izao!
Mifandraisa aminay: 0 850 532 44 61
Tena mora ny mitantana ny fivarotana Amazon.com.tr misy Propars!
Ny tahiry rehetra dia arahana ho azy. Hita taratra eo noho eo ny fanovana ny vidiny sy ny stock
Ny baiko avy amin'ny Amazon.com.tr dia voaangona amin'ny efijery iray ihany miaraka amin'ny baiko hafa rehetra.
Ny tranokalan'ny varotrao
Ny programa ERP anao
Vokatra sy baiko
Vokatra / baiko -tsena
Tena mora ny mivarotra amin'ny Amazon.com.tr miaraka amin'ny Propars!
Azonao atao ny mampakatra ny vokatrao amin'ny Propars amin'ny alàlan'ny Excel na XML.
Azonao atao ny mivarotra ireo vokatra ampidinao ao amin'ny Propars amin'ny N11 amin'ny tsindry tokana.
Manaova fanavaozana betsaka amin'ny vokatra.
Mamorona e-faktiora maimaimpoana ho an'ny baiko amin'ny tsindry iray
Tantano ny e-varotra amin'ny efijery tokana miaraka amin'ny Propars Marketplaces Integration
Fidirana vokatra mora: Azonao atao ny manampy ny vokatra ampidirinao ao amin'ny Propars amin'ny fivarotanao amin'ny tsena rehetra amin'ny fotoana iray ary manokatra azy ireo hamidy.
Fiovan'ny vola mandeha ho azy: Azonao atao ny mivarotra ny vokatrao amidy amin'ny vola vahiny any amin'ny tsena Tiorka ao amin'ny TL, ary afaka mivarotra ny vokatrao amin'ny TL ianao miaraka amin'ny taham-panakalozana samihafa any amin'ny firenena samihafa.
Fanavaozana eo noho eo ny sarany sy ny vidiny: Azonao atao ny manamarina avy hatrany ny fivarotanao sy ny magazay ara-batana amin'ny tranokala e-varotra lehibe indrindra eran-tany Amazon, eBay ary Etsy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehefa mivarotra vokatra ao amin'ny Propars ao amin'ny fivarotanao ara-batana ianao ary lany ny tahiry, dia mihidy ho azy ny vokatra amidy ao amin'ny fivarotana any Amazon France amin'ny fotoana iray ihany.
Tsena maro kokoa: Ny tsena any Torkia sy ny tsena lehibe indrindra eran-tany, Propars, dia ampidirina hatrany amin'ny tsena efa misy sy any amin'ny firenena vaovao.
Ankehitriny: Ny fanavaozana natao eny an-tsena dia arahin'ny Propars ary ampiana ao amin'ny Propars.
Vidy marobe: Amin'ny alàlan'ny famoronana vondrona vidin-javatra dia afaka mivarotra amin'ny tsena rehetra miaraka amin'ny vidiny tianao ianao.
Fitantanana endri-javatra: Azonao atao ny mitantana mora foana ny endri-javatra ilaina amin'ny tsena amin'ny Propars.
Safidy vokatra: Azonao atao ny mamindra safidin'ny vokatra toy ny loko sy ny habeny amin'ny tsena rehetra amin'ny alàlan'ny famaritana sary sy vidiny samihafa.
Propars Fanontaniana napetraka matetika
Inona no atao hoe Propars?
Propars dia programa manamora ny varotra izay azo ampiasaina amin'ny orinasa mivarotra. Mamonjy ireo orinasa tsy hampiasa programa samihafa ho an'ny zavatra ilainy isan-karazany izy io, ary mamonjy fotoana sy vola amin'ny orinasa. Noho ireo fiasa marobe toa ny fitantanana tahiry, ny fitantanana kaonty mialoha, ny filaminana ary ny fitantanana ny mpanjifa, ny orinasa dia afaka mamaly ny filany rehetra ao anaty tafon-trano iray.
Inona avy ireo fiasa ananan'ny Propars?
Propars dia manana fitantanana fitehirizana, fitantanana fividianana, fitantanana kaonty, fitantanana e-varotra, fitantanana kaomandy, endrika fitantanana serasera ho an'ny mpanjifa. Ireo modules ireo, izay samy feno dia feno, namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny SME.
Inona no dikan'ny fitantanana ny e-varotra?
Fitantanana ny e-varotra; Midika izany fa mahatratra mpanjifa an-tapitrisany any Torkia sy manerana an'izao tontolo izao ianao amin'ny fitondrana ireo vokatra amidinao amin'ny orinasanao amin'ny Internet. Raha manana Propars miaraka aminao ianao dia aza misalasala, ny fitantanana e-varotra dia mora be amin'ny Propars! Propars dia manamboatra ny ankamaroan'ny fizotrany ilaina ary manampy anao hahomby amin'ny varotra e-varotra.
Aiza amin'ireo fantsom-barotra e-varotra no hamarotana ny vokatrao miaraka amin'ny Propars?
Ao amin'ny tsena nomerika lehibe indrindra izay mpivarotra maro toa ny N11, Gittigidiyor, Trendyol, Hepsiburada, Ebay, Amazon ary Etsy no mivarotra ny vokariny, dia apetrak'i Propars avy hatrany ny vokatra amidy iray monja.
Ahoana no hamindrako ny vokatrao any Propars?
Mba hahafahan'ny vokatrao amidy amin'ny tsena Internet maro dia ampy ny mamindra azy ireo any Propars indray mandeha. Ho an'ity, orinasa kely manana vokatra vitsivitsy dia afaka miditra mora foana amin'ny vokariny amin'ny alàlan'ny modely Propars Management of Propars. Ny orinasa misy vokatra maro dia afaka mampakatra rakitra XML misy fampahalalana momba ny vokatra ao amin'ny Propars ary mamindra vokatra an'arivony maro any Propars ao anatin'ny segondra vitsy.
Ahoana no fomba hanombohako mampiasa Propars?
Azonao atao ny mangataka fanandramana maimaim-poana amin'ny fipihana ny bokotra 'Andramo maimaimpoana' eo amin'ny zoro ambony ambony amin'ny pejy tsirairay ary fenoy ny endrika misokatra. Rehefa tonga any aminao ny fangatahanao, dia hiantso anao avy hatrany ny solontenan'ny Propars ary hanomboka hampiasa maimaim-poana ianao amin'ny Propars.
Nividy fonosana aho, afaka manova azy ve aho avy eo?
Eny, azonao atao ny mifamadika amin'ireo fonosana amin'ny fotoana rehetra. Raha te haharaka ny filàna miova amin'ny orinasanao dia miantso fotsiny Propars!
Amidio manerana izao tontolo izao dia mahazo bebe kokoa!
Miaraka amin'ny Propars, manomboka mivarotra amin'ny tsindry iray amin'ny tsena manerantany toa an'i Amazon, Ebay ary Etsy!
Tantano ny baiko avy amin'ny efijery iray
Angony ny baikonao rehetra amin'ny efijery tokana, faktiora amin'ny tsindry iray! Afaka mamoaka e-faktiora amin'ny ampahany ho an'ny baiko avy amin'ny tsena sy ny tranokalanao e-varotra; Azonao atao ny manonta ny endrika entana betsaka.
Raha mampakatra ny vokatrao amin'ny Propars indray mandeha monja dia azonao amidy amin'ny tranokala rehetra amin'ny tsindry tokana.
Tsy mila manahy momba ny famoahana misaraka isaky ny vokatra ianao. Vokatra an'arivony no hamidy ao anatin'ny segondra vitsy ao amin'ny magazay fidinao.
Tsy afaka manapa-kevitra?
Avelao izahay hanampy anao hanapa-kevitra.
Miantso ny solontenan'ny mpanjifa momba ny fonosana azafady.
Ny Propars no hany vahaolana any Torkia ary vahaolana manerantany momba ny E-EXPORT. Izy io dia mpiara-miombon'antoka amin'ny serivisy Amazon, Ebay, Etsy ary Payooner. Manohana azy i KOSGEB sy i Türk Telekom.
© 2020 Mpaminany. Zo rehetra voatokana.
Ny tranokalan'ny e-Varotra
e-faktiora sy e-archive
Fifanarahana sy Politika
Ny fandoavana ankehitriny